Mbappe Oo Lagu Wado Inuu Sii Joogo PSG – Garsoore Sports
Mbappe Oo Lagu…
Kylian Mbappe ayaa hadda u muuqda mid sii joogi doona Paris Saint-Germain inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxda reer France ay iska indho tirayso horumararada Real Madrid oo ay ka door biday inay halis geliso inay weraryahanka ku weyso beeca xorta ah sannadka dambe.
Mbappe ayaa caddeeyay inuu doonayo inuu ka tago PSG wuxuuna sheegay inuusan saxiixi doonin qandaraas cusub oo ka baxsan heshiiska haatan oo dhacaya xagaaga soo aaddan.
Real Madrid ayaa isha ku haysay inay xaaladda kusoo biirto waxayna soo bandhigtay laba dalab oo waaweyn oo ah £ 137m kaddibna 154 milyan oo ginni, laakiin PSG ma aysan aqbalin labada dalab midkoodna booskoodana uma badna inuu isbeddelo.
Sky Sports ayaa soo warinaysa in suurtogalnimadu ay weli tahay in PSG ay beddeli karto maankeeda oo ay aqbali karto dalabka labaad, ama in Real Madrid ay ku laaban karto dalab saddexaad oo ah ku dhowaad 171 milyan oo ginni, laakiin kuwani waa kuwo aan macquul ahayn marka ugu dambaysa ee suuqa kala iibsiga uu soo dhamaado.
Cristiano Oo Afka Furtay Markii United Ay Xaqiijisay Soo Laabashadiisa